Sagantaa SWO Kamisa Hagayya 12, 2021 - Independent Oromia
Sochii WBO guyyoota 4n kanaa as: Lixa Oromiyaa keessatti
WBOn daangaa to’annoo isaa babal’ifachuutti fufe
WBOn Magaalotaa fi Onoota Oromiyaa to’annoo ofii jala galchuu itti-fufee jiraachuu. Haaluma kanaan, Magaalaa Gimbiin alatti, Onoonnii fi Magaalonni Konyaa Lixa Wallaggaa jala jiran irra-jireessi, akkasumas, Onoonni baadiyyaa Magaalaa Naqamtee jala jiran muraasni to’annoo WBO jala galfamuu.
Bakkeewwan to’annoo ofii jala galchaa jiru hunda keessattiyyuu, WBOn, dhimma akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo, akkasumas, barbaachisummaa Qabsoo Hidhannoo fi deggersa WBO irratti uummata isaaf hubannoo kennaa fi caasaa bulchiisaa diriirsaa jiraachuu.
Odeessa biraan, ogeessi (abukaattoo) seeraa Obbo Abduljabbaar Huseen, Roobii kaleessaa (Hagayya 11, 2021) Magaalaa Adaamaa keessatti ajjeefaman. Ogeessi seeraa Obbo Abduljabbaariin itti-dhiheenyaan beekan tokko, ajjeechaa kana duuba harki qaamota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa jiraachuu akka hin oolle RSWO’tti himanii jiru.
Oromoonni 250 ol ta’an guyyoota sadan kana qofa Konyaa Gujii Bahaa keessaa hidhamuu
Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo ilaalchisuun marii Jaal Gaaddisaa Jibaat waliin taasifame
Gocha hammeenyaa Oromoota Ona Hawwaa Galaan irratti RIXn raawwatamaa jiru
Marii Ajajaa WBO K/Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame
Marii Jaal Marroo waliin Dhimma Yeroorratti Taasifame
Sagantaa Kamisa Hagayya 12, 2021